Soo dejisan Dr.Fone toolkit for iOS 10.0.10.63 – Vessoft
WindowsMultimediaTelefoonkaDr.Fone toolkit for iOS
Bogga rasmiga ah: Dr.Fone toolkit for iOS
Dr.Fone xidhmo ee macruufka – software a universal si loo xakameeyo xogta oo ka mid ah qalabka macruufka. Software ka kooban badan oo modules, mid kasta wuxuu mas’uul ka yahay falalka qaarkood inta lagu jiro shaqada la xogta qalabka. xidhmo Dr.Fone macruufka u saamaxaaya in ay eegista gurmad xogta qalabka on your computer iyo soo celinta xiriirka lumay, SMS, sawiro ama files kale oo ka qalab iyo raad raac ah oo iTunes ama iCloud. software waa ay awoodaan in ay saxaan dhibaatooyinka sida joogtada ah qeybtii labaad, screen caddaan ama Apple logo la xanibay, failure inuu ka tago hab DFU iyo cayayaanka kale ee caadiga ah ee nidaamka macruufka ah oo aan saamayn xogta user ah. xidhmo Dr.Fone macruufka kuu ogolaanaya in aad si aad u qabato oo ay u qoraan screen ka mid ah qalabka iyo tirtirto dhammaan xogta shakhsiga ah ama soo xulay. Sidoo kale software ah waa awoodaa inuu ka soo kabsado taariikhda waraaqaha iyo faylasha ku lifaaqan ee WhatsApp, LINE, KIK iyo Viber.
Recovery of data lumay
Wuxuu diyaariyaa ah cayayaanka caadiga ah ee nidaamka macruufka ah
Qabsashada oo lagu qoro ee shaashadda qalab
Ka saarida xogta shakhsiyeed
Recovery of taariikhda waraaqaha iyo faylasha ku lifaaqan ee wargeeyayaal caan
Soo dejisan Dr.Fone toolkit for iOS
Faallo ku saabsan Dr.Fone toolkit for iOS
Dr.Fone toolkit for iOS Xirfadaha la xiriira